InkHunter, edza chaiwo matattoo paApp Store | IPhone nhau
InkHunter, edza chaiwo matattoo paApp Store
MaTattoos ari kuramba achiwedzera kurongeka kwezuva. Hakuna vashoma avo vefashoni kana zvikonzero zvakasiyana vari kutanga kutara miviri yavo neingi, vachiuya kuzotarisa mamwe emabasa echokwadi ehunyanzvi. Nekudaro, iyo chokwadi chekuti vanoonekwa sevanoshanda kwehupenyu hwese (kunyangwe paine nzira dzinoshanda dzekubvisa), uye marwadzo ekujekeswa kwavo, zvinotungamira vazhinji kusavaita kunyangwe vachivada. Kune vanhu vakadaro, kubudirira kweApp Store kwauya, InkHunter, chishandiso chinokutendera iwe kuti ugadzire uye uedze chaiwo matattoos paganda rako nekuda kwechokwadi chakawedzerwa.
Pasina panikiro kutaura, kwaitova nezvirongwa zvakafanana nezvikumbiro, uye kuti tichishandisa zvitambi isu tinogona zvakare kuyedza izvi, asi zvaisambove nyore uye sezvazviri neIngHunter, ichi chishandiso chinotibvumidza kuyedza matattoo edu nenzira iri nyore inogoneka, uye izvo ndosaka zvave kurova paApp Store. Aya ndiwo maratidzirwo anoitwa timu yekusimudzira.
Uchishandisa inkhunter iwe unogona kuyedza pane chero tattoo yakanangana nemuviri wako.
Iko kushandiswa kunoshandisa chaicho chakawedzerwa, zvinoreva kuti:
● Tatoo inogona kutariswa mu 'nguva chaiyo'
● Kubva pakona dzakasiyana
● Uye ugadzirise zvakananga paganda rako.
InkHunter zvakare inokutendera iwe ku:
● Wedzera nyora dzako
● Bvisa maTatoo kubva pane zvakanyorwa pamapepa
● Cheka nyora nekuchinjanisa nemakona emuviri wako
Maitiro ayo ekushanda ari nyore.
Sarudza nyora> Tora mifananidzo inoshamisa> Vagovane neshamwari dzako
Inotora 25 MB chete, iyo chete asi ndeyekuti iri muChirungu chete izvozvi, asi ngativimbei kuti nekukurumidza kana kuti gare gare, zvisinei, iyo yekuwedzera poindi ndeyekuti iko kushanda kwepasirese kune ese ari maviri iPhone uye iPad uye iPod Kubata. Inoenderana nechero iOS system yakakwira kupfuura iOS 8 uye nemubhadharo wakasanganiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » InkHunter, edza chaiwo matattoo paApp Store
Inoshamisa iOS 10 pfungwa iyo chero munhu angade
NaVidLib zvese zvakateedzana, mafirimu uye terevhizheni pane yako Apple TV